Safarka madaxwaynaha Soomaaliya ee Dalka Sucuudiga iyo Xog ku saabsan ! | Casuura.com kala soco warar sugan & xoggo rasmi ah
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa in maalinto beri u dhoofaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Farmaajo ayaa Sacuudiga uga qeyb galaya shir madaxeedka 29aad ee Wadamada ku bahoobay Jaamacadda Carabta, waxaana shirkan sidoo kale kasoo qeyb galaya Madaxweynayaal kale.
Wafdi horu dhac u ah Madaxweynaha Soomaaliya uu hogaaminayay Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya ayaa shalay gaaray dalka Sacuudiga, waxa uuna Wasiirka ka qeyb galaya shirka horu dhaca ah ay yeelanayaan Wasiirada Arimaha Dibadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu Sacuudiga joogo la kulmi doono qaar kamid ah Madaxda ka qeyb galeysa Shirka Jaamacada Carabta, waxa uuna kala hadli doonaan sidii ay u xoojin lahaayeen xariirka kala dhaxeeya Soomaaliya.
Warar kale oon heleyno ayaa sheegaya in marka uu shirka dhamaado Dowlada Sacuudiga dhax dhaxaadin ka dhax bilaabi doonto Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta oo xiriirkooda hada meel xun gaaray.
Dowlada Soomaaliya ayaa horey dacwad ka dhan ah Dowlada Imaaraatka Carabta iyo shirkada DP Worl ugu gudbisay Jaamacada Carabta, waxaa sidoo kale dacwad ka dhan ah Soomaaliya iyana jaamacada Carabta u gudbisay Dowlada Imaaraatka.